MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 894
>စာရေးဆရာမ ဒေၞခင်ဆြေဦး ၇၅ိံစြ်ူပည့် မြေးနေႚ အလပြဲူမင်ကငြ်း
Law Eh Soe - Irrawaddy Photo Essays (10)
>Cartoon Maung Yit – Crime Does Not Pay as many as 65 years like Oppositions in Burma
> Cartoon Maung Yit – Crime Does Not Pay as many as 65 years like Oppositions in BurmaNovember 14th...
>Book review: Aung Ba La book
> ကြေးမုံဦးသောင်း (အောင်ဗလ) အမှတ်တရစာစုမောင်စွမ်းရည်နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ကြေးမုံဦးသောင်းလို့ ကျော်ကြားတဲ့ စာရေးဆရာကြီး အောင်ဗလဟာ အသက် (၈၂) နှစ်အရွယ်၊ ၂၀၀၈ ဧပြီ (၃) ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ...
>My MyitKyiNa – MoeMaKa Mateson Pwe 2008
> မိုးမခ မိတ်ဆုံပွဲ မိုင် မြစ်ကြီးနား နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈ အားရစရာကောင်းလိုက်တာ၊ ဘာနဲ့မှ နှိုင်းမရပါဘူး။ စာပေ အနုပညာလောကမှာ နာမည်ကျော် လူသိများတဲ့ ဆရာကြီး ဆရာမကြီး ငါးဦးတို့နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်...
>Alin Yaung – Poster Campaign – Free Them All Now in Burma
> အလင်းရောင် – အားလုံးကို ချက်ချင်း လွှတ် ကင်ပိန်းပိုစတာ နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related...
>9th Annual Burmese Literary Talk Part 1
> 9th Annual Burmese Literary Talk (8th Nov 2008) Video Documentary Part 1 Mar Mar Aye & Nyan Oo...
>Than Soe Hlaing – The Real Destroyer of our Union
> ပြည်ထောင်စု ဖြိုခွဲသူ တို့ရန်သူ သန်းစိုးလှိုင် နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာအင်တာနက်သုံးစွဲသူများရဲ့ ဖိုရမ်တခုမှာ အဏ္ဏ၀ါစစ်သည် တစ်ဦး အမည်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေပိုင်နက် ပြဿနာအပေါ် သူ့အမြင်ဖေါ်ပြထားသည်ကို ဖတ်လိုက်ရသည်။...
>Zart – Mother Potrait
> ဇာတ် – အမေ နိုဝင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Unknown – Poem
> အန်နိုး – ဖက်တွယ်ထားပုံ ကဗျာUnknown – Poem November 13th 2008 No tags for this post. Related posts No related...
>Win Pe Bag – 7
> (အသံ နားဆင်လိုပါက ဤနေရာ ကို နှိပ်ရန်) ၀င်းဖေလွယ်အိတ် အမှတ် ၇မင်းသားကြီး ဦးထွန်းေ၀၀င်းဖေနိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များခင်ဗျား ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ရုပ်ရှင် သဘာဝမင်းသားကြီး ဦးထွန်းဝေကို ကျနော်က လေးလေးထွန်းဝေ...
>Zay Hmine – Poem
> အတွေးတစ်စ ဇေမှိုင်း နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ နှစ် ၄၀ ကျော် တဝိုက်မှာ ချစ်ခဲ့ ကြိုက်ခဲ့တာများ ပြန်စဉ်းစားရင် လွမ်းသလို ဆွေးသလို၊၊ ငါ … အိမ်ပြန်မယ် စဉ်းစားတော့...
>Burmese Lawyer U Aung Thein – Last testimonial before sentenced
> တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြုသည်ဟု စွတ်စွဲခံရသည့် ရှေ့နေဦးအောင်သိန်း၏ ထောင်ဒဏ်မကျခံရမီ ရုံးတော်သို့ လျှောက်ထားချက် လက်ခံရရှိ မိုးမခ နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်ပြုသည်ဟု စွတ်စွဲခံရပြီး မျက်ကွယ်တွင် ထောင်ဒဏ်နှင့်...
> နိုင်ငံတကာက ဖိအားပေးနေသည့်ကြားက စစ်အစိုးရက အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူများကို ထောင်ချ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈ အမေရိကန်အစိုးရက မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်ရန် တင်ပြနေချိန်၊ ဥရောပ သမဂ္ဂကလည်း...
>9th Annual Burmese Literary Talk hosted at SF Bay
> From 2008 – 9th Annual Burmese Literary Talk ဘေးဧရိယာ မြန်မာများ စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ နိုဝင်ဘာ...
>Saw Wai poem 01
> ဖေဖော်ဝါရီဆယ့်လေး စောဝေ နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ အာရင်ဘက်က ပြောတယ်နာနာခံစားတတ်မှ ခံစားမှရူးရူးမူးမူးကို ဖြစ်နေမှကြီးမြတ်တဲ့အနုပညာလို့မှူးမှုံမှိုင်းဝေစေတဲ့ ဓာတ်ပုံမော်ဒယ်မလေးရေကြီးတောင့်ကြီးမားကျမှ အသည်းကွဲတဲ့ရောဂါ တဲ့သန်းပေါင်းများစွာသော ချစ်တတ်သူများရွှေအတိချထားသောလက်များဖြင့် လက်ခုပ်တီး၍ရယ်ပါ။ ။ 1.10.2008 (မူရင်း-အချစ်ဂျာနယ်၊ ဇန်န၀ါရီ...
>Burmese blogger receives 20-year imprisonment
> မြန်မာဘလော်ဂါ ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၂၀ ပေးခံရဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ နေဘုန်းလတ်၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ http://nayphonelatt.blogspot.com/ တွင် ဖော်ပြထားသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်။ (ဓာတ်ပုံ – နေဘုန်းလတ်)မြန်မာအာဏာပိုင်တို့က ဘလော်ဂါနေဘုန်းလတ်ကို ထောင်ဒဏ် အနှစ်...
> အနှစ် နှစ်ဆယ်ပန်ဒိုရာနိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ဒါဟာ ကလီရှေးဖြစ်နေတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟိုနားဒီနား လျှောက်သွားနေတဲ့ ဝေါဟာရဒါပေမယ့် ရွေးချယ်စရာက မရှိတော့ဘူးရှေ့မှာ အနှစ်နှစ်ဆယ်စာကြီးက ပက်လက်မျောနေတယ်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လည်း မျောခဲ့တာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ပဲခေါင်းငုံ့နေလိုက်မလား ကြာသွားမယ်အနှစ်နှစ်ဆယ်ဒါဆိုခေါင်းမော့ကြည့်ရဲသလား တွေ့သွားမယ်အနှစ်နှစ်ဆယ်အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး အိပ်မက်ကတစ်မျိုးထဲရယ်အနှစ်နှစ်ဆယ်ထောင်ချောက်ထဲမှာ...
>world economic crisis effects on Burma
> ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အကြပ်အတည်း မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း ထိခိုက် မိုးမခ အထောက်တော်(ရန်ကုန်) နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ရန်ကုန်မြို့လယ်မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ-မိုးမခ) စက်တင်ဘာလဆန်းတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဈေးကွက်ဖြစ်သည့် ဝေါလ်စထရိ မှ...
>Lay Htee Ohn Maung – After 50 years passed … (3)
> နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကြာသောအခါလေထီးဦးအုန်းမောင်နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၀၈ သီဟိုဠ်(သီရိလင်္ကာ)မှ အပြန်ခရီးသီဟိုဠ် (သီရိလင်္ကာ) ရှိ စစ်အဆောက်အအုံ အမှတ်၂၅ (ME 25) စစ်ကျောင်းတွင် သင်ယူ နေသော စစ်သင်တန်းသည် မတ်လ...
>Mar Mar Aye 252
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၂)အဆိုတော်ဝင်းဖေမာမာအေးနိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 22
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 22 No tags for this...
>Bamaw Tin Aung by Htet Myet
> ဗန်းမော်တင်အောင်နှင့် သူ၏စာပေတာဝန်ထက်မြက်နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ အနှစ် ၃၀ ဆိုသည်မှာ မျိုးဆက်တဆက်၏ သက်တမ်းဟု ယေဘုယျ သတ်မှတ်ထားသဖြင့် လွန်ခဲ့သော ၁၉၇၈ ခုနှစ်သည် မျိုးဆက်တဆက် ခြားခဲ့ပြီဟု ပြောရပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့...
>Bamaw Tin Aung by Aung Way
> ဗန်းမော်တင်အောင်အောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ ညမှာထွန်းတဲ့မော်ကွန်းတစောင် – –အမှောင်ခွင်း၍ အလင်းဆောင်။ ပင်လယ်ရိုင်းမုန်တိုင်းထဲမယိုင်လဲတဲ့ကျောက်ဆောင်။ နရသိန်စစ်စစ်ညများကုန်လွန်သွားသော်တနေ့သော် – – ။ “ဗန်းမော်တင်အောင်”အလင်းရောင်သည်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ ထွန်းလိမ့်မည်။ ။ (မူရင်း – ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်း၊...
>Bamaw Tin Aung by Htain Linn
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၃)ပြည်သူ့စာဆို ဗန်းမော်တင်အောင်ထိန်လင်းနိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်ကနေ ဒီကနေ့အထိ စာပေလွတ်လပ်ခွင့် အရှိဆုံးခေတ်ကို ပြောပါဆိုရင် ဖဆပလ အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ကိုပဲ ပြောရမှာပါ။ အဲဒီလို လွတ်လပ်တဲ့ခေတ်မှာ...
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခန်း(၁၅)အောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ ‘ထီးသုဉ်း နန်းသုဉ်း၊ မြို့သုဉ်းသုည၊ သုဉ်းသုံးဝဖြင့်၊ သုဉ်းရပြန်လစ်၊ သုညခေတ်ဝယ်၊ ဖြစ်လာရလေ၊ တို့တတွေသည်၊ သေသော်မှတည့် သြော် ကောင်း၏။’ ကိုလိုနီခေတ်ဦးတုန်းက ဆီးဘန်နီဆရာတော်ကြီး ရေးခဲ့တဲ့...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 21
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 21 No tags for this...
>Mogok’s literature award goes to Atway Amyin
> အတွေးအမြင်စာစောင် မိုးကုတ်္ဘမို့မှစာပေဆုရရှိမိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၂နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အတွေးအမြင်စာစောင်သည် မိုးကုတ်မြို့၊ သဟာယစာကြည့်တိုက်၏ နှစ်ပတ်လည်ဆု (၂၀၀၉)ကို ရရှိသွားသည်။ သဟာယစာပေဆုကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ စတင် ရွေးချယ်...
>lawyers under attack
> ရှေ့နေတွေကို ချေမှုန်းပြီဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန် (တိုက်ပုံအင်္ကျီအညိုဖြင့် ထိုင်နေသူ) ရှေ့နေ ဦးမြတ်သောင်း၊ ဦးအောင်သိန်း၊ ဦးကြည်ဝင်း စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအတွက် အကျိုးဆောင်လျက်ရှိသော ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်း၊ ဦးခင်မောင်ရှိန် တို့ကို...
>Htain Linn – National Day 2008
> အမျိုးသားအောင်ပွဲ မော်ကွန်းထိန်လင်းနိုဝင်ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈ ‘ယူနီဗာစီတီ အက်’ တဲ့တက္ကသိုလ်က ပြဋ္ဌာန်းချမ်းသာ ဆင်းရဲ ခွဲတဲ့သဘောတင်းကျပ်တဲ့သဘောကန့်သတ်တဲ့သဘောအဲဒီလို သဘောတွေကြောင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေ အုံကြွပထမ သပိတ် စခဲ့သည်။ အဲဒီ သပိတ်နဲ့အတူပြည်သူတွေ နိုးကြား‘အမျိုးသားကျောင်း’ ဆိုတာလည်း...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 20
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 20 No tags for this...
>Ohn Myint poem 02
> မြွေအုန်းမြင့်နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ အဲဒီမြွေဟာငါ့ကိုဟိရိသြတ္တပ္ပမျက်လုံးတပ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်အဲဒီမြွေဟာငါ့ကိုခါးစည်းဝတ်ပေးခဲ့တယ်ကောက်ပဲသီးနှံ ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့တယ်ငါ့မယားကိုသမိုင်းမျိုး ကြဲပက်စေခဲ့တယ်ဂျိမ်းစတက်ဖန်ကတဆင့်“တူရွင်းတလက်ဓားတချောင်းနဲ့ဦးနှောက်တခု” ** ပေးပို့ခဲ့တယ်ငါ့ကိုတိရိစ္ဆာနဗေဒနဲ့ အာကာသသျှတ္တရကျမ်းဆူလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်အဲဒီမြွေဟာတနေ့သောအခါတိရိစ္ဆာန်တကောင်ဖြစ်လာပြီး ကမ္ဘာကိုပိုင်စိုးဖို့ငါ့လည်ချောင်းထဲအဆိပ်အိမ် တည်ဆောက်ပေးခဲ့တယ်။ ။ ** A sword,aspade and...
Page 894 of 948«1...892893894895896...948»